ဗဟုသုတ Archives - YATHAZONE
” မဖတျဘဲ ကြျောသှားရငျတော့ သငျ … ဘာမှ သိလိုကျမှာ မဟုတျပါဘူး ” ( လောကကွီးက သငျပေးမဲ့ လူတှအေကွောငျး )
zawgyi ” မဖတ်ဘဲ ကျော်သွားရင်တော့ သင် … ဘာမှ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး “ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရှိတဲ့အခါ …လောကကြီး ကသင့်ကို လူတွေအကြောင်း သင်ပေးသွားပါ လိမ့်မယ် ။ ။. သင်ဆုံးရှုံးမှုတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး ဆင်းရဲမွဲတေ နေတဲ့အခိုက်မှာ … စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆိုတာ ခင်မင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဆိုတာ စာနာပါတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ သင့်ကို သင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ် ။ အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်. .. လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပေးတဲ့ မိတ်ဆွေထက် အဆင်မပြေတဲ့အခါ နှစ်သိမ့်စကားတစ်ခွန်းပြောပေးတဲ့ မိတ်ဆွေက ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ် ။ ပြဿနာတိုင်းက သင့်ကို … …
တစ်လမှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင်
တစ်လမှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင် သောကကင်းစင်ငွေဝင်အစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည် သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင် ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည်မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျားယခု ဆရာတင်ပေးမည့်အစီရင်လေးက မိမိရည်မှန်းစီမံထားသည့်အလုပ်ကိစ္စများလုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်နိုင် ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေကတစ်မျိုးလုပ်ချင်နေတာတွေက တစ်မျိုးအလွဲ့လွဲ့အချော်ချော်ဖြစ်နေကြသည့်ကာလအတောအတွင်းမှာ စိတ်ရှုပ် စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေခြင်းငွေကြေးပူပင်သောကဖြစ်နေခြင်းဟူသမျှ ကာကွယ်ကင်းစင်စေဖို့ရန်နှင့် ငွေဝင်ငွေပွားစေမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအစီရင်လေးကိုဒါနပြုပါတယ် ရရက်သားသမီး မည်သူမဆို လုပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျားပန်းကန်ပြားမှာ ပိုက်ဆံ ၁၁ဝဝကျပ်တင်ပါပိုက်ဆံပေါ်မှာ သံပုရာသီးစစ်စစ်၂ လုံး နှင့် ရေဖြည့်ထားသော ဖန်ခွက်တင်ထားပါ အိမ်ဘုရားမှာ တနင်္လာနေ့ တစ်ညထားပြီးလျှင် နောက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ နံက်( ၇ )နာရီမှ ( ၇ )နာရီခွဲအတွင်းသံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၄စိပ်စိပ်ပြီး အိမ်ခြံ တိုက်ခန်း ထောင့် ၄ထောင့်မှာ တစ်စိပ်စီ …
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုလောက်ရအောင် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပုံ
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုလောက်ရအောင် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပုံ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဂုဏ်ယူစရာ၊အတုယူစရာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျနော်တစ်ခု တင်ပြပါ့မယ်။(တခြားဘာသာဝင်များလည်း ဗဟုသုတ အနေဖြင့်ပဲ ဖတ်ပေးပေါ့နော် အားလုံးပဲ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကို သိကြမှာပါ။ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားဟာ ဉာဏ်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခက်ခဲဆုံး စာမေးပွဲဖြစ်တဲ့ တိပိဋကဓရရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲ မှာ (ရေးဖြေ) – သီလက္ခန္ခဝဂ် – ၉၃-မှတ် မဟာဝဂ် – ၉၇-မှတ် ပါတိကဝဂ် – ၉၇-မှတ် ပါရာဇိကဏ် – ၈၉-မှတ် ပါစိတ်ပါဠိတော် – ၉၉-မှတ် မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော် – ၉၂-မှတ် စူဠဝဂ္ဂပါဠိတော် – ၉၈-မှတ် ပရိဝါပါဠိတျော – ၁၀၀-မှတျ ဖွငျ့ ဂုဏျထူးဖွငျ့ …
ရင့်ကျက်စွာ ချစ်တတ်သူတွေရဲ့ အချစ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားမှု
ရင့်ကျက်စွာ ချစ်တတ်သူတွေရဲ့ အချစ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားမှု အရွယ်ရောက် လာတဲ့သူတိုင်း အချစ်ကို ခံစားကြရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်ကို ခံစားကြတဲ့ပုံစံ၊ ပြုမူတန်ဖိုး ထားတဲ့ ပုံစံတွေ မတူကြပါဘရင့် ကျက်တဲ့သူတွေကတော့ သူတို့ အချစ်ရေးကို ဒီလိုပဲ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ (၁)မချုပ်ချယ်တတ်ဘူး ချစ်တဲ့ သူတိုင်း သဝန်တိုမိ တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့လိုက်ချုပ်ချယ် တာမျိုးကို ရင့်ကျက် သူတွေက မလုပ်ကြပါဘူး။ သူတို့ကတော့ ချစ်သူက ချုပ်ချယ်ခံ ထားရသလို မခံစားရစေဖို့ ပြုလုပ် တတ်ကြ ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာချုပ်ချယ်မှ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း တွေးကြပါတယ်။ ရင့်ကျက်စွာ ချစ်တတ်သူတွေရဲ့ အချစ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားမှု …
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ… တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ… တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ … သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ ” (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ ။ ) တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် အဇာတသတ် ရှင်ဘုရင်းအား သာမညဖလ သုတ်တော်ကို ဟောတော်မှု၍ ဘုရင်နှင့်တကွ နောက်ပါပြည်သူ ( ၁ ) သိန်းခန့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တဲ့ ညကြီးပါ။ ဒီလို ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနေ့ကြီးကို မသမာသူများက စုတ်ပျက်အောင် သူခိုးညဆိုပြီး နာမည်တပ်လိုက်တော့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည၌ …
ဂဠုန်ဦးစော ယူဆောင်သွားတဲ့ အလောင်းဘုရား စစ်ထွက်သစ္စာဆို သင်္ကန်းနက် ဘုရား ပြန်တွေ့ပြီ
ဂဠုန်ဦးစော ယူဆောင်သွားတဲ့ အလောင်းဘုရား စစ်ထွက်သစ္စာဆို သင်္ကန်းနက် ဘုရား ပြန်တွေ့ပြီ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၁၁၄)ခုနှစ် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၆၃) နှစ်လောက်ကတည်းက ခမည်းတော်မင်းညိုစံ မယ်တော် ခင်ယွန်းစံတို့ဦးစီး၍ ရွှေဘိုမြောက်လက်မှ ဗေဒင်ပညာရှိပန်းပုဆရာတစ်ဦးက အိမ်တော်တွင်ကိုးကွယ်ရန် သင်္ကန်းနက် မတ်ရပ်စွန်တောင်ဆွဲ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ ထုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပင်းယခေတ် လက်ရာမျိုးရုပ်ပွားတော်သည် ကြာမောက် ကြာလန် ပလ္လင်အမြင့်(၁၀)လက်မ ဉာဏ်တော်အမြင့်(၃၄)လက်မရှိပါသည်။ ဤဘုရားကိုအမှတ်(၉) ရပ်ကွက်မြတ်စောညီနောင်ဘုရား၏ စနေထောင့်တွင် အတိတ်နိမိတ်အောင်မြေ(သို့) ရာဇအောင်မြေစေတီကို မင်းမဖြစ်မှီ တည်ထားကိုးကွယ်အပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၁၁၄) ခုနှစ်တွင်မှ အနေကဇာတင်ပြီးခဲ့ပါသည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် စစ်ထွက်တိုင်း ဤဘုရားကိုသစ္စာဆိုပြီး ဆင်ပေါ်တွင်တင်၍ ပင့်ဆောင်လေ့ရှိရာ(၁)နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၁၄)ပွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရုပ်ပွားတော်ကို (၁၉၄၂)ခုနှစ်က နန်းရင်းဝန် ဂဠုန်ဦးစောမှ အလောင်းဘုရား …
သွေးထွက်အောင်မှန်နေတဲ့ နိမိတ်တဘောင်နှင့် ယနေ့ မြန်မာပြည်
သွေးထွက်အောင်မှန်နေတဲ့ နိမိတ်တဘောင်နှင့် ယနေ့ မြန်မာပြည် “ကုန်းဘောင်ခေတ်ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် တဘောင်တစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်” (၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကို ဆင်းမည်။ (၂) ထိုဟင်္သာကို မုဆိုး လေးနဲ့ခွင်းမည်။(၃) မုဆိုးကို ထီးရိုးရိုက်လိမ့်မည်။(၄) ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မည်။(၅) သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက်ပေါ်လိမ့်မည်။ (၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။(၇)လက်ပံလည်း ရှားလိမ့်မည်။(၈)ကြက်မတွန်လို့ မိုးလင်းမည်။(၉)ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်(၁၀)ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး စည်ကားသာယာ ဝပြောလိမ့်မည်။ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ ။ ။ (၁) ဟင်္သာမင်း အင်းကိုဆင်းမည် -ဟံသာဝတီမွန်တို့ အင်းဝကို သိမ်းပိုက်လိမ့်မည်။ဟင်္သာမှာ ဟံသာဝတီမွန်တို့၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး အင်းဆိုသည်မှာ အင်းဝကို ဆိုလိုသည်။အင်းတို့၏အဝမှာရှိလို့ အင်းဝ …
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ..(ညီမလေးတွေ သတိထားဖို့)
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ..(ညီမလေးတွေ သတိထားဖို့) ချစ်သူရည်းစားနဲ့ Living Together ကိစ္စချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together )လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ ။ အချိန်တွေ ဘာတွေ ဆွဲပြီး တွဲနေရင်တော့ကောင်လေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် ကောင်မလေး ဘက်က အရမ်းကို နစ်နာတယ် ။အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ …
သင်ရွေးချယ်မယ့် ပန်းလေးတွေက ဖော်ပြမယ့် သင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်အ ကြောင်းများ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
သင်ရွေးချယ်မယ့် ပန်းလေးတွေက ဖော်ပြမယ့် သင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် လူတွေရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ပန်းလေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ ပန်းလေးတွေကလည်း သက်ရှိလေးတွေပဲ… ၄င်းတို့ဟာလည်း လူလိုပဲ တစ်ပွင့်တစ်မျိုးစီပါ… အခုစမ်းသပ်ချက်လေးနဲ့ သင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1.အမေရီလီစ် ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာသင်ချစ်သူတွေအတွက်မမေ့နိုင်စရာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေဖန်တီးပေးတတ်ပြီး အမြဲရွှင်လန်းနေတတ်တာကြောင့် သင့်ကို ဒီပန်းနဲ့တင်စားပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ သင်ဟာ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလို့ပဲ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတတ်တယ် ပြောင်မြောက်တဲ့စကားလုံးရွေးချယ်ပြီးနှစ်သိမ့်တတ်တာ၊ ဖြေရှင်းရမဲ့ပြဿ နာတွေအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့ကြောင့် သင့်အနားမှာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ အမြောက်အမြားရှိနေတာပါ။ ဒီပန်းဟာ ရှူမောဖွယ်အလှဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ဆောင်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့အလှကိုလဲကိုယ်စားပြုပါတယ်။ 2.လီလီပန်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သင်ဟာ အားအင်အပြည့်နဲ့ပါ။ အားကောင်းတဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါကြောင့် လူတွေသင့်ကို ၀န်းရံဖို့ရောက်လာကြတယ်။ သင်ရဲ့ အားတွေ …
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများ ထဲတွင် တစ်ဆူပါဝင်သော မော်တင်စွန်း ဆံတော်ရှင်မြတ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများ ထဲတွင် တစ်ဆူပါဝင်သော မော်တင်စွန်း ဆံတော်ရှင်မြတ် ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင်စွန်း စေတီတော် ကပ္ပလီပင်လယ် (Andaman Sea)နှင့်အနာက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် (BayofBenga l) တို့ထိစပ်ရာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်းခြားထားရာနေရာလေးတခုဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းဝင်တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများထဲတွင် တစ်ဆူ အပါအဝင်ဖြစ်သော၊ ဆံတော်ရှင် မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီတော်သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနောက် တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးနေရာတွင် တည်ထားလျှက်ရှိပါသည်။ တဖုသနှင့် ဘလိက္က ကုန်သည် ညီနောင်နှစ်ဦးတို့ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ထားချက်အရ ပေးသနားတော်မူသောဆံတော်ရှစ်ဆူအနက် နှစ်ဆူကို ဇေယျသေန နဂါးမင်းက သက္ကရာဇ်၁၀၃ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းပင့်ဆောင်ပြီး ဌာပနာကာ စေတီတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်သည်ဟု သမိုင်းရာဇဝင်များတွင်တွေ့ရှိရပြီး အသောကမင်းကြီးလက်ထက်တွင် တစ်ကြိမ် ပုဂံခေတ် အလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက်တွင်တစ်ကြိမ် ထပ်မံမွမ်းမံတည်ထားခဲ့ပါသည်။ ဆံတော်ရှင်စေတီတော်မြတ်ကြီးအား …
Total views : 689088